I-'HARRY POTTER 'YOMLAMBO I-CRUISE ILAPHA KE IINKQUBO ZAKHO ZEHONEYMOON ZIBHALISIWE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato I-'Harry Potter 'ephefumlelweyo yoMlambo ohamba ngenqanawa ulapha ke iiNkqubo zakho zeHoneymoon zibhalisiwe
Umbono omtsha weHarry Potter ophefumlelweyo we-honeymoon ulapha oya kuba nabalandeli be-franchise abahlala kumlingo okungenani iintsuku ezintandathu. (Shutterstock.com)
Ngu: Esther Lee 01/25/2018 ngo-11: 30 AM
Bamba iihippipiffs zakho! Umbono omtsha weHarry Potter ophefumlelweyo we-honeymoon ulapha oya kuba nabalandeli be-franchise abahlala kumlingo okungenani iintsuku ezintandathu.
I-Barge Lady Cruises ibhengeze i-Potter-enikelwe umlambo ohamba ngesikhephe, iMagna Carta, enokuthi ibambe iindwendwe ezisibhozo. Uhambo luya kuqala kwihotele i-Stafford eLondon, apho abasebenzi beza kubulisa abakhweli ngolwamkelo olufudumeleyo.
Isikhephe siya kuthi emva koko sihambe ngomlambo iThames kwaye siye kuma emaphandleni kwiindawo ezahlukeneyo ezintle apho kuboniswe khona imifanekiso bhanyabhanya ethandwayo. Inkampani yaseMelika yokuhamba ibhalise iindawo zokumisa kwiindawo ezininzi ezingalibalekiyo, kubandakanya iKholeji yaseChrist Church kwiYunivesithi yaseOxford, apho iHolo enkulu ibisebenza njengokhuthazo emva kweholo yaseHogwarts enegama elifanayo.
Ezinye iindawo zokumisa indawo zibandakanya iVirginia Water Lake eSurrey, indawo apho uHarry Potter aqala khona ukudibana neBuckbeak iHippogriff Ibanjwa laseAzkaban . IVirginia Water yayibonakalisiwe kwi I-Goblet yoMlilo . Abakhweli baya kujika ngePick Post Vala, indawo yokwenyani yekhaya lakwaDursley le-4 Privet Drive, apho uPotter wayehlala evaleleke ebuntwaneni bakhe ngaphakathi kwikhabhathi phantsi kwezitepsi.
Isikhephe ngokwaso sinamagumbi okulala amane kunye neendawo ezimbini zokulala, kunye nebhafu eshushu, igumbi lokutyela, imigangatho eshushu kunye namagumbi okuhlambela. Ixabiso, nangona kunjalo, liya kukuseta $ 4,190 ngomntu ngamnye, nangona ukutya (imveliso efumaneka ngaphakathi, inyama kunye nentlanzi) kunye newayini ifakiwe.
Bhukisha kungekudala kuba u-2018 Umbumbi -iinqanawa ezizodwa kuphela ziyafumaneka kumaqela amabini , uhambo lokuqala luza kuqala ngo-Agasti 5 ukuya ku-11, luze olwesibini luqale ngomhla we-19 ukuya ku-25.
yintoni iqela lothethathethwano
i-rock rock tile yomgangatho
Indlela efanelekileyo yokuziphatha yezimemo zomtshato
kufuneka utshintshe ifani yakho xa utshata
Umama womtshato womtshato waselwandle